Myanmar Actress Photos: Famous actress, Soe Myat Nandar's beautiful fashion photos
Home » Soe Myat Nandar » Myanmar Actress Photos: Famous actress, Soe Myat Nandar's beautiful fashion photos
#Soe Myat Nandar
Soe Myat Nandar is Myanmar famous actress. She is the younger sister of Soe Myat Thuzar, Myanmar famous actress. She married with Phyo Gyi, Myanmar famous singer last three year ago in 2005, but they divorced each other in 2008 after announcing about "their end of marriage" on State Newspaper. Now, Soe Myat Nandar does not show up much on the screen any more. However, Soe Myat Nandar is the beautiful and attractive Myanmar girl and Myanmar actress. Soe Myat Nandar has already received The Best Myanmar Actress Academy Award. Now, Soe Myat Nandar is living together with her only one Son, Myat Thaw Maung.
Myanmar Popular Actress, Soe Myat Nandar Fashion Photos
Myanmar Famous Actress, Soe Myat Nandar and her Cousin, Actress Soe Pyae Thazin
စိုးမြတ်နန္ဒာကနာမည်ကျော် မင်းသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မင်းသမီး စိုးမြတ်သူဇာ ရဲ့ ညီမငယ် လည်းဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် အဆိုတော် ဖြိုးကြီး နဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ် ခဲ့ ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ ဟာ မြန်မာ အနုပညာ ချစ်ပရိတ်သတ်ကို အတော်လေး စွဲဆောင်မှု ရှိစေခဲ့ ပါတယ်။ နာမည်ကျော် မင်းသမီး နှင့် အဆိုတော် တို့ရဲ့ လက်ထပ်ပွဲ အထိမ်းအမှတ် စုံတွဲ တေးသီးချင်းတွေလည်း ထုတ်ခဲ့ ကြပါတယ်။
၂၀၀၈ မှာတော် မင်းသမီး စိုးမြတ်နန္ဒာ က ဖြိုးကြီး ကို ကွာရှင်းပြတ်ဆဲကြောင်း သတင်းစာ မှာ အတိအလင်း ကြေငြာခဲ့တာပါ။ ဖြိုးကြီး ကလည်း မကွာရှင်းနိုင်ပါဘူးဆိုတာကို အပြိုင်အဆိုင် သတင်းစာ မှာ ကြော်ငြာထည့် ပြီး ငြင်းခုန်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း စိုးမြတ်နန္ဒာ ကို အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေမှာ သိပ်မတွေ့ ရတော့ပါဘူး။ စိုးမြတ်နန္ဒာ ဟာ မြန်မာ့ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆုကို ရရှိဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စိုးမြတ်နန္ဒာက သားလေးတစ်ယောက်နဲ့ အတူနေပါတယ်။